Ebee ka Isi Ntanetị Email na-aga? | Martech Zone
Sunday, October 25, 2009 Wednesday, February 10, 2016 Adam Obere
Adabala m n'omume jọgburu onwe ya nke itinye ụfọdụ ozi ịntanetị iche maka ihe maka otu ọnwa ma ọ bụ karịa. Enwere m usoro ntanetị maka ozi ịntanetị na-abata. Ọ bụrụ na ha achọghị ka anya ma ọ bụ mee ihe ozugbo n'ime oge iji zere ụdị ihe mgbu ụfọdụ, ana m ahapụ ha ka ha nọrọ. Ikekwe nke ahụ bụ ihe jọgburu onwe ya. Ma ọ bụ ma eleghị anya ọ bụghị.
Okwu a nile mere ka m soro enyi m (onye na-eche "oge echere m") banyere otu ojiji ma ọ bụ nzube (ma ọ bụ abụọ) nke email na-agbanwe. Enweghị m akwụkwọ sayensị iji zoo ebe a. Ihe a dabere na nchoputa nke aka m dika onye na ekwuputa ahia na dika onye nwere otutu ngwangwa teknuzu ohuru. (Anọghị m n'akụkụ isi nke usoro ahụ, mana m nọ n'isi mmalite nke mkpọda dị nro.)
Chee maka mgbanwe n’usoro anyi si ede ihe site n’ide ihe. Ana m ekwu banyere ọtụtụ mmadụ, ọ bụghị teknụzụ ahụ, n'agbanyeghị. Laa azụ n'ụbọchị anyị zipụrụ akwụkwọ ozi nzi ozi ma ọ bụ telegram site n'oge ruo n'oge. Anyị chọpụtara otu esi ebugharị ndị njem ahụ ngwa ngwa na ndị ozi na ọrụ abalị. Ma e nwere faksị. Mgbe email bịara, anyị na-ede ihe yiri leta? ogologo, akara ederede ziri ezi, okpurukpu okwu, nkwukọrịta okwu na uzọ ọzọ. Ka oge na-aga ọtụtụ n'ime ozi ịntanetị ndị ahụ abụrụla ndị na-eme ngwa ngwa. Ugbu a, ihe dịka SMS, Twitter na Facebook na-enye anyị nkenke na ngwa ngwa nke na-enye anyị ohere isi n'otu ihe gaa na nke ọzọ.
Kedu ihe ga-abụ email? Maka ugbu a, m ka na-ele email anya maka ogologo oge, nke bara uru, nke otu n'otu? ihe echere m ma ọ bụ onye nabatara ya n'onwe m, mana enweghị ike igosipụta ya na mkpụrụedemede 140. M ka na-ejikwa ya iji chọọ ozi m rịọrọ. Ma, n'ezie, m ka na-eji ya agwa ndị na-emebeghị ozi ọzọ ma ọ bụ mgbasa ozi mmekọrịta.
Ọ bụrụ na m nọ n'akụkụ aka nri m na nyocha m, nkwukọrịta nkwukọrịta anyị nwere nnukwu mmetụta na ịre ahịa email. Yabụ, gịnị ka ị chere? Ebee ka email na-aga? Biko kwuo okwu n'okpuru. Ma ọ bụ, hey, zitere m email.
Tags: apeemail-enyi na enyimgbasa ozi mgbasa oziụlọ ọrụ
Ọkt 25, 2009 na 10:52 PM
Echere m na a ga-enwe ebe ọ bụla maka email… ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ihe yiri ka anyị si emekọrịta site na email taa. Anyị ga-achọ ụzọ iji kwurị okwu nkwukọrịta otu-na-otu, ma nwee oge ebe ihe anyị ga-ede ga-adị nkenke karịa mkpụrụ edemede 140 kwere.
Mma nke teknụzụ na-apụta bụ na anyị nwere ike belata ọnụọgụ email anyị site na iji ụzọ ndị ọzọ maka nkwukọrịta nke na-adabaghị na nkọwa ahụ. SMS maka ozi dị mkpirikpi, IM maka ezigbo ozi oge, Twitter na Facebook maka ozi na-ọtụtụ, RSS maka nnata ọkwa, Google Wave maka mmekorita otu, wdg.
Ọkt 25, 2009 na 10:55 PM
Ekwenyere m na email agbanweela ntakịrị mana ana m echetara oge ụfọdụ na abụ m akụkụ nke ndị "nakweere" na mbido usoro ahụ. Maka nke a, ọ na-eju m anya oge ụfọdụ mgbe echetara m site na mmekọrịta mụ na ndị ọzọ na ọtụtụ mmadụ ka "na-anọrọ" email. M na-ele email dị ka ọkara usoro iwu azụmahịa nkwurịta okwu, ebe Facebook bụ maka ozi nkeonwe m. Enweghị m akaụntụ email nkeonwe, naanị akaụntụ azụmahịa. Email m bụkwa igbe mbata ozi m… ọ bụghị naanị maka nkwukọrịta. Akwụkwọ akụkọ m na-abata site na email, ihe ngosi m, ozi azụmahịa m, wdg.na m na-eji Igbe mbata iji hazie ihe niile.
Ọkt 26, 2009 na 2:33 AM
Otu n'ime ihe ndị m na-agbasi mgba ike na email bụ ndabere anyị na ya. Otu n'ime ndị ahịa m kpọrọ m n'izu a wee jụọ ihe kpatara na azaghị m ozi ịntanetị ya, na ha bidoro gosipụta ọkọlọtọ dị ka SPAM na nchekwa Junk Email m.
Ọ bụ ihe nwute na email agbanwebeghị. Ọ naghị enyere aka na ndị na-echekwa email (Microsoft Exchange na Outlook) ka na-arụ ọrụ na teknụzụ afọ 10. Outlook ka sụgharịrị site na iji nhazi usoro ihe karịa ịhazi teknụzụ ọhụụ !!!
Ekwenyere m na teknụzụ ndị a na-enyere… mana enwere ike anyị na-ekpe ekpere maka ihe ọhụụ ga - abịa kemgbe email nwere ọtụtụ nsogbu ịdabere.
Ọkt 26, 2009 na 1:45 PM
You hụla ọkwa a site na Tim O'Reilly?
ma obu nke a:
nke a kpaliri post gị:
Ọkt 26, 2009 na 9:19 PM
Aghọtara m ihe ị kwuru ọbụlagodi na m na-eji email m obere ihe na-erughị ọtụtụ ndị enyi m na-ezitere m messagest o na akaụntụ Social Network m. Mana echere m na email anaghị anwụ anwụ ma ọ bụ na ọ dị nso ọnwụ ya na ụfọdụ atụmatụ ọhụrụ agbakwunyere na ọ ka ga-anọ ebe a ogologo oge.